Ina-dhuubo oo uu Eebahay u Fara Goday Kana Soo Fakaday, Xeebta Dhiiga Ogadeenka – Rasaasa News
Jun 16, 2010 Ina-dhuubo oo uu Eebahay u Fara Goday Kana Soo Fakaday, Xeebta Dhiiga Ogadeenka
Waxaanu hore idiinku sheegnay in Jwxo-shiil, uu kaga soo fakaday Xeebta dhiiga Ogadeenka [Eritrea] Ina-dhuubo oo aanu sheegnay in uu noqon doono ninka Ogadeenka ah ee ugu dambeeya ee ay Eritrea ku sadqayso.
Amarka Eebeweyne Ina-dhuubo isaga oo fayow, balse fiigsan ayuu ku soo laabtay dalkii uu Qaxootinimada ka sugayey 11 sano ee Denmark.
Waxa aanu isleenahay waxaa arintan Ina-dhuubo siidayntiisa ah keenay heshiiska cusub ee dhexmaray Jabuuti iyo Eritrea. Xeebta dhiiga Ogadeenka ayaa go,doon ka ah aduunka intiisa kale, waxayna aad ugu faraxday heshiiska ay haatan Jabuuti la gashay ee ay qadar qaabaysay.
Talaabadan, ay qaaday Eritrea ayaa waxaa xigi doona qorshe kale oo ay wado Qadar oo ah in uu heshiis dhex maro kol dhaw Itobiya iyo Eritrea, oo ay ka astaaq furulaystaan dhibkii ay gaadhsiiyeen dadweynahooda [tolow anaga dambiga nalaga galay ma laga astaaq furulaysan].
Waxaana ay arintani fida-bax u noqotay xubnaha kooxda Jwxo-shiil, ee joogay xeebta dhiiga Ogadeenka [Eritrea] oo iyagu haatan ka soo dhamaaday xeebtaas, iskuna soo urursaday Yurub, oo sida uu Jwxo-shiil sheegay ay doonayaan in ay qas ka abuuraan.
Ina-dhuubo oo hilib iyo haragba ay ka idlaadeen kuna riyooda habeenkii rasaasa.com iyo toshka ay ugu hayso dadkii uu dambiga ka galay ayaa soo galay Denmarka. Ina-dhuubo, waxaa uu ka mid yahay afarta nin ee loo haysto dilkii Dr. M S Dolal, oo ahaa Aabihii halganka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya, ayna ku adag tahay in uu si fudud uga maydhmo quluubta dadweynah Somalida Ogadeeniya.
Waxaa isweydiin leh hadii Eebahay Ina-dhuubo ka soo furtay xeebtii dhiiga Ogadeenka, Eebhay ma ka furandoonaa dambiga loo haysto ee lagu dabo taagan yahay.